Mpitantana ny tetikasa fanadinadinana fanontaniana valiny - ITS Tech School
Ny resaka miresaka amin'ny fitantanana fironana amin'ny toerana misokatra dia zavatra tsy maintsy ataoko fa tsy mieritreritra ny tsotra. Ahoana no hahafantaranao izay tokony hanontaniana? Ankoatra izany, ahoana no hampiasanao matetika ny fotoana fohy mahitsy mba hanomezana ilay mpifaninana fahafahana hampiseho ny tenany amin'ny hazavana marina indrindra?
1. Inona no tsy ilainao hanesorana azy?
2. Raha mila miala amin'ny fitantanana ny fiantsoana ianao ho fiantsoana, avy amin'ny 1-10 ahoana no mety handraisanao izany?
3. Inona no zavatra tena manan-danja indrindra amin'ny fanaraha-maso ny governemanta?
4. Inona no anananao ny tanjaky ny herinao isan'andro?
5. Ahoana no hiarahanao amin'ny mpanohana? Ahoana no hanaraha-maso anao?
6. Tamin'iza no fotoana farany tsy nametrahana anao ary inona no raharaha?
7. Inona no safidy tsy araka ny tokony ho izy ny safidinao?
8. Inona avy ireo fepetra azonao lazaina fa mampiasa ny findainao manaraka?
9. Ahoana no fomba hampitomboanao ny fitantanan-draharaha eo amin'ny fitantanana eo amin'ny orinasanao amin'izao fotoana izao?
10. Inona no fitaovana fisainana manitikitika ny sainao?
Ankoatra izany, dia mora amin'ny mpanafika ny mamaly ny valin'ny fanontana maromaro momba ny antony maro samihafa momba ny fifantenana sy ny fitenenana. Manana fotoana be dia be izy ireo hampihatra ny valin-dry zareo, noho izany dia mety hahatsapa ho toy ny fanaka mifintina ny fanatontosana ny zavatra rehetra.
Nanangona ny fangatahana famonoana 10 ahy aho hanangona loham-pifandraisana iray. Amin'ny manaraka ianao dia mila mandefa olona ho an'ny vondrona misy anao, maninona raha manandrana ny sasany amin'ireto?
Mahafinaritra amin'ny antony izay: Misy ireo karazana asa tsy miankina izay tsy itiavantsika, na dia eo aza ny fitantanana ny mpitantana matetika dia mitifitra amin'ny asa izay alehany. Tsara ny manana fironana, na izany aza dia mitady olona izay afaka maneho hevitra amin'ny filàn'ny orinasa ianao na inona na inona mety hitranga fa tsy izany no fanapahan-kevitr'izy ireo.
Fihetseham-po mahatsikaiky: "Mitsambikimbikina aho amin'ny fikarakarako ny tolotra ataoko, ary tena mila manao ireo media avo misongadina aho. Tsara izany, tsy hilaza ve izy fa tsy izany? "
Mahatalanjona hatramin'ny: Ity dia hampiseho aminao ny fomba fijeriny ny fiantsoana azy ireo ary raha toa izy ireo miatrika fivoarany amin'ny ampahany PM. Anontanio azy ireo ny antony marim-pototra noraisin'izy ireo.
Fihetseham-po mahatsiravina: "Hataoko ny 1 raha vao manao izany aho mba hameno ny fotoana alohan'ny ahafahako manorina toerana ara-drariny."
Tsara be hatramin'ny: Hanaporofo aminao ny zavatra ilainy izy ireo ary na izy ireo dia tena nandinika tsara ny zavatra ataon'ny lehiben'ny raharaham-bahiny. Haneho koa izy ireo raha mety ho fitondran-tena mendrika ho an'ny vondrona misy anao izany. Raha toa ka manana fifantohana matanjaka amin'ny fizotrany ianao ary mieritreritra fa ny zavatra tena ilaina dia ny manova azy ary manitsy ny endrika alehanao, dia mety tsy ho tonga ianao.
Fanehoan-kevitra mahatsiravina: "Eny ary, ho an'ny ankamaroan'ny mpandrindra, tsy hilaza ve sa tsia?"
Mahatalanjona hatramin'ny: Ity dia manome famantarana ho anao ny fanatanterahany ny asany. Ny olona izay mandany mandritra ny tontolo andro ao amin'ny PC dia mety mifanaraka amin'ny toe-javatra misy anao, na mety hitady mpitantana ny orinasa izay mivoaka sy mitsidika ny mpanjifa androany amin'ny herinandro. Ataovy ao an-tsaina fa afaka manangana vahaolana hafa izy ireo fa tsy ny zavatra ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao, ka raha mandre zavatra izay tsy mifanaraka amin'ilay lahatsoratra andefasanao azy ianao dia aza manakalo azy ireo alohan'ny fanadihadiana ity fanampiny ity.
Fanehoan-kevitra mampihetsi-po: "Facebook."
Tsara ny manamarika fa: Ny fitantanana dia midika hoe miasa amim-piravoravoana amin'ny olona ambony kokoa noho ianao. Ampitao ireo mpitantana ny fampandrosoana tsy tapaka, noho izany dia mahafinaritra ny mamantatra ny fomba anaovany ireo fifandraisana ireo.
Fihetseham-po mampihetsi-po: "Miantehitra amin'ny tsy hanohanana ny fanohanako aho. Matetika izy ireo no tsy manao firaisana, ka tsy manahirana azy ireo aho. "
Mahatalanjona hatramin'ny: Ity dia hanampy anao hiasa amin'ny tsy fahafaha-mifaly mba hahafaly azy ireo amin'ny maha-izy azy manokana sy hampianatra anao momba ny vanim-potoana iray nahatonga azy ho ratsy. Izany dia maneho ny fahaizany mahazo tombontsoa avy amin'ny fiambenana sy ny fomba hitantanany ny angon-drakitra. Ny fanaovana famandrihana asa dia tena zava-dehibe amin'ny fisorohana ny asa ary mila mifanerasera amin'olona mahatsapa izany ianao.
Fanehoan-kevitra mampidi-doza: "Izaho dia tsy manome solontena velively-tsy dia mitaky ny hanaovana azy io mihitsy."
Hatramin'izao: Afaka mampiseho ny fahalalany ny Code of Ethics PMI izy ireo ary tsy misy dikany ny tsy fahatsiarovan-dry zareo an'izany, ny fomba ankilany hiatrehana ny asa. Afaka mampiasa izany koa ianao mba hanokatra fifanakalozan-kevitra mahavariana ary hamela anao hitsara ny fomba hifanaraka amin'ny kolontsain'ny orinasa.
Fihetseham-po mahatsiravina: "Nanaiky fifanarahana tamin'ny zanak'olo-mpiray tam-po amiko indray aho, na dia izy aza no be mpampiasa indrindra. Nahazo fotoana mahafinaritra aho tamin'ny famerenana ny baolina. "
Hatramin'ny: Haneho aminao ny zava-dehibe ho azy ireo any am-piasana: mari-pankasitrahana maitso, hetsika asa, fanitsiana asa / fiainana, miasa ho an'ny marika lehibe sy ny sisa. Izany dia hampahafantarinao koa raha toa ka miasa tsara izy ireo na mahita ny fampiroboroboana anao ary tsy afaka misoroka (na tsara).
Fihetseham-po mampihetsi-po: "Fanonerana, fandaniana vola ary fahafahana handeha any ivelany."
Tsara ny antony: Tsy ny tsirairay no manana fahafahana hitifitra amin'ny sehatra ara-barotra, manentana ireo orinasa manao CV iray mahatalanjona, na izany aza, ny olon-drehetra dia manana fahafahana hanolotra tolo-kevitra sasantsasany momba ny fanovana (na inona na inona mety hitranga fa tsy nakarina). Mitadiava olona izay manana eritreritra ary tsy maniry ny hametraka azy ireo.
Fihetseham-po mahatsiravina: "Tafakambana mahafinaritra eto aho nefa mbola tsy niezaka nanao fihetsika satria tsy misy teboka."
Hatramin'ny: Manamarina ny fitsapana ny fahaiza-manaon'ny fanantenana. Hiresaka momba ny hazan-dranon'ny trondro ve izy ireo, ny kapoakan'i De Bono, mieritreritra hoe? Fanalalahana momba ny olana ara-pihetseham-po farany napetrak'izy ireo tamin'ny fomba fijery an-tsaina.
Fihetseham-po mampihetsi-po: "Manana fikolokoloana hikarakarana ny olana aho nefa tsy ahitako ny vondrona."